१०५ दिनपछि आज बिहानै उदायो मंगल ग्रह, यी ५ राशिलाई अत्यन्त शुभ ! – List Khabar
Home / जीवनशैली / १०५ दिनपछि आज बिहानै उदायो मंगल ग्रह, यी ५ राशिलाई अत्यन्त शुभ !
१०५ दिनपछि आज बिहानै उदायो मंगल ग्रह, यी ५ राशिलाई अत्यन्त शुभ !
admin November 29, 2021 जीवनशैली Leaveacomment 164 Views
वर्तमान संवत्सरको राजा र मन्त्री दुवै पदमा बस्ने महान ग्रह पृथ्वी पुत्र मंगल ग्रह ३ महिना १२ दिन अस्त रहेपछि मंसिर १३ गते सोमबार अर्थात् आज बिहान ६ः१८ बजे तुला राशिमा प्रवेश गरी पूर्वमा उदाएको छ । यसअघि मंगल ग्रह भदौ १ गते साँझ ७ बजे पश्चिममा अस्ताएको थियो। जसको कुण्डलीमा हाल अशुभ घरमा मंगल स्थित रहेको छ उनीहरुको लागि कम तर शुभ घरमा उपस्थित हुनेहरुको लागि मंगल धेरै शुभताको कारक रहनेछ । मेष र वृश्चिक राशिको स्वामी मंगललाई कर्कट राशिमा दुर्बल र मकर राशिमा श्रेष्ठ मानिन्छ। मंगल ग्रहको उदय हुँदा कुन-कुन राशिमा शुभ प्रभाव पर्नेछ भन्ने बारेमा जानौं….
मंगलको उदय हुनु तपाईंको लागि कुनै वरदान भन्दा कम हुने छैन। शत्रु परास्त हुनेछन्, अदालती मुद्दामा पनि राम्रो सफलता मिल्नेछ। तपाईंले लिएको निर्णय र गरेको कामको पनि प्रशंसा हुनेछ। रमणीय तथा लाभदायक यात्राको सम्भावना रहेको छ। वैदेशिक नागरिकता वा भिसा आदिका लागि आवेदन दिन खोज्दै हुनुहुन्छ भने अवसर अनुकूल रहनेछ। सावधानीपूर्वक यात्रा गर्नुहोस्।
मंगल ग्रहको प्रभावले धेरै अनपेक्षित परिणाम दिनेछ। तपाईंका लागि सम्पत्तीसँग सम्बन्धित मामिलाहरू मिल्ने खुसीको खबर पनि छ। घर वा सवारी किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने अवसर अनुकुल छ । आमाबाबुको स्वास्थ्य चिन्तनशील हुनुहोस्। कुनै पनि प्रकारको सरकारी सेवामा आवेदन दिन चाहनुहुन्छ भने समय तपाईंको पक्षमा रहनेछ । उच्च अधिकारीबाट सहयोग मिल्नेछ ।
मंगल ग्रहको उदय तपाईंको लागि ठूलो सफलताको कारक साबित हुनेछ। कुनै प्रकारको कार्य योजनालाई अन्तिम रूप दिन चाहनुहुन्छ भने अवसर अनुकूल हुनेछ। नोकरीमा पदोन्नति र नयाँ करार प्राप्त हुने सम्भावना छ। परिवारमा दाजुभाइसँग मतभेद बढ्न नदिनुहोस्। जिद्दीपनलाई नियन्त्रण गर्नुहोस्। धर्म-कर्ममा रुची बढ्नेछ। वैदेशिक कम्पनीमा सेवा वा नागरिकताका लागि गरिएका प्रयास सफल हुनेछन् ।
मंगल ग्रहको प्रभाव तपाईंका लागि वरदान भन्दा कम हुने छैन। तपाईले चाहानु भएको सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं कुनै ठूलो काम सुरु गर्न चाहनुहुन्छ वा सम्पत्ति सम्बन्धी मामिलाहरू समाधान गर्न चाहनुहुन्छ भने, यो अवसर उत्कृष्ट हुनेछ। प्रतियोगितामा बस्ने छात्र-छात्रा तथा विद्यार्थीहरुलाई अपेक्षित सफलता मिल्नेछ । नव दम्पतिका लागि सन्तान प्राप्तिको योग रहेको छ।
मंगल ग्रहको प्रभावले राम्रो सफलता मिल्नेछ। रोजगारीको दिशामा गरिएका काम सफल हुनेछन् । सामाजिक पद-प्रतिष्ठा पनि बढ्नेछ। तपाईंले लिएको निर्णय र गरेको कामको पनि प्रशंसा हुनेछ। उर्जा शक्ति र अदम्य साहसको सहयोगले तपाईंले कठिन परिस्थितिलाई सजिलै पार गर्नुहुनेछ। परिवारका वरिष्ठ सदस्यबाट सहयोग मिल्नेछ ।
Previous रोमानियाको भिसा आवेदन सहज गरिदिन श्रममन्त्रीको आग्रह
Next डिसेम्बर १ मा अष्ट्रेलिया खोल्ने कि नखोल्ने निर्णय गर्न आपतकालिन बैठक बस्दै